ဥပုသ်အတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် (International Business Times) - Your Brain On Porn
ဥပုသ်အတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် (International Business Times)
ဖေဖော်ဝါရီ 10, 2016 - အဲလက်စ်အန်ဒါဆင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ ကျွန်ုပ်၏စျေးပေါသောမီးဖိုချောင်သုံး pancakes နှင့်မတူသည်မှာနှစ်သစ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် Lent မှုတ်သွင်းထားသောတားမြစ်ချက်များမှာခဲယဉ်းသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏အပြုအမူကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများထက် ပို၍ လိုအပ်သည်၊ ကျန်းမာရေးကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်ယောက္ခမများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခြင်း။ သို့သော်သင်ကမကျေနပ်သော၊ စျေးကြီးသောအားကစားရုံအသင်းဝင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အရက်ကိုလျှော့ချရန်ခက်ခဲသည်ဟုသင်ထင်လျှင်ညစ်ညမ်းစာကိုစွန့်လွှတ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှကြောင်းလုပျမလဲ ကောင်းပြီ, porn နိုင်ပါတယ် သင်တို့အဘို့ဆိုးရွား။ အဲဒီမှာငါကပြောသည်။ သို့သော်“ သင်မျက်မမြင်သွားရလိမ့်မည်” (သင်အမှန်တကယ်စွန့်စားရမှုမရှိလျှင်မဟုတ်) သောလမ်းတွင်မပါပါ။ မဟုတ်ပါ၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်သင့်အတွက်မကောင်းပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာအားလုံးစားသုံးနိုင်သောဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဥပမာတခု။ ဥပုသ်ဆုတောင်းပဌနာ, penance, နောင်တတရားနှင့် Self-ငြင်းပယ်အကြောင်းကို, အစဉ်အလာအရသိရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း-addled စိတ်ထဲ, အဲဒီစကားအနည်းဆုံးသုံးလာနိုငျ hairless သဘောတူညီခကျြလူကြီးများကောင်းသောအရာမမှတက်ရသည့်အတွက်ညံ့ဖျင်း-lit မြင်ကွင်းများ၏ရုပ်ပုံများကိုတက် conjure ။ စတုတ္ထရိုးရှင်းစွာမက်ဒေါနားသငျ့လျြောနှင့်အတူ flirts သောညံ့ဖျင်း-lit အစုံ (နှစ်ခုလုံး sartorially နှင့်ဂီတ) စိတ်မှတောင်းဆိုထားသည်။
ငါကနောက်တာပါ၊ ငါသီချင်းကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်နှင့်ချိတ်ဆက်မိလျှင်၊ သင်၏အသက်တာကိုထိန်းချုပ်။ နောက်တစ်ခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းဘယ်မှာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသင်စိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းမှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေဖို့အခွင့်အရေးရဖို့လူမှုဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုကိုငြင်းလိုက်တဲ့အခါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏လက်တွဲဖော်၏တိုးတက်မှုကိုတမင်တကာဖျက်ပစ်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိပ်ရာဝင်ကြလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လက်တော့ပ်နှင့်အချိန်မဖြုန်းနိုင်ပါ။
တချို့ကကံမကောင်းစွာ, porn-သွေးဆောင် dopamine တစ်ခုအစဉ်အဆက်အားကောင်း hit များအတွက်အပူတပြင်းဦးနှောက်, မှောင်မိုက်ညစ်ညမ်းယုန်တွင်းကိုဆင်းပျောက်ကွယ်သွား
ဒေါက်တာ Valerie Voon, အဘယ်သူ၏အလုပ် porn ၏ဦးနှောက်ပုံစံများနှိုင်းယှဉ်ကပါဝင်ပတ်သက်ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ neuropsychiatrist တူသောလူများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသော်လည်း - သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်း compulsive အပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစားတစ်ခုစွဲအဖွစျဖျောပွနိုငျရှိမရှိကျော်တစ်ဦးသဘောတူဖွဲ့စည်းရသေးသော်လည်း ပစ္စည်းဥစ္စာများသူတို့နှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားစွဲဤသုတေသနနယ်ပယ်အတွက်အုတ်မြစ်ချနေသည် - ၎င်းသည်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုရန်လုံလောက်သောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရှိသည်။
ထှထှေကေုအတွက်သိသိသာသာတိုးအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆယ်ကျော်သက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဦးနှောက်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ထင်ဘရော့ဘန်းနှင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မပြောင်းလဲသော, သာမန်မိန်းကလေးထဲကအဘယ်သူမျှမတက်ရတဲ့ကနေတဆင့်ရရှိနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏မူးဝြေခင်းအမျိုးမျိုးအပေါ်ဆူဝပြီ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူတို့ကအလုပ်များတဲ့လိင်အင်္ဂါအတွင်း sensitivity ကိုဆုံးရှုံးများနှင့်များနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရလဒ်အဖြစ်ကို real-ဘဝတွေ့ဆုံအတွက် ပို. ပို. ခက်ခဲကြောင်းသတင်းပို့သည်။
ထို့အပြင်အချို့သောကံဆိုးဖွယ်ကောင်းသော ဦး နှောက်များသည်ညစ်ညမ်းသော dopamine ကိုပိုမိုထိရောက်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည့်နှိုးဆွမှုအတွက်လိုအပ်သောအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်မှောင်မိုက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသည့်ယုန်တွင်းများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အစားအစာသည်အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်လာပြီးလူအများအပြားအ ၀ လွန်လာသည့်အရည်အသွေးထက်အရေအတွက်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သောကမ္ဘာကြီးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကဲ့သို့ပင်နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းနှင့်အနည်းငယ်သောအုန်းအုန်းခြင်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။
porn အပေါ်မှီခိုဆက်ဆက်ငါ၏အဆက်ဆံရေးများထဲမှဖျက်ဆီးခံရနှင့်အလွန်နီးပါးငါကိုဖြတ်ပြီးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အခြားအပေါ်သေဆုံးသူယူ www.yourbrainonporn.comငါရီစရာ porn များအတွက်ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်က်ဘ်ဆိုက်။
ဤ site သည်သုတေသနနှင့်ဆန်းစစ်ချက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများအားလုံးအတွက်သိုလှောင်ခန်း (လိုအပ်သည့်စကားလုံးများ၏ရွေးချယ်မှုအားနည်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သိသည်) ကိုလိုအပ်သည့်တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်အငြိမ်းစားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာ Gary Wilson ၏အကြံအစည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများနှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသည့်ဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်“ rebooting” ပုံပြင်များသည် ဦး နှောက်၏ညစ်ညမ်းမှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ပါဝင်သူများသည်ရှင်းလင်းသောခေါင်းများ၊ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း။
ဒါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မှားယွင်းမှုလား။ အတည်ပြုချက်ဘက်လိုက်မှု၏ရလဒ်? တစ် ဦး ကpornရာညစ်ညမ်းမှုရလဒ်များ plbo? ဖြစ်နိုင်စရာ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူအရေအတွက်မှာများပြားလာသည်။ Reddit's Nofap အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှသောင်းနှင့်ချီသောအဖွဲ့ဝင်များကဥပမာအားဖြင့် 'fapstronauts' ဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော်လူမိုက်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရယ်စရာကောင်းသော nomenclature ကိုမငြင်းခုံကြပါစို့နှင့်။
ငါကအဲဒါကို 'fap' ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့မခေါ်ဆိုချင်ပေမဲ့ငါဟာ porn ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေးသူဖြစ်တယ်။ ဒီတွေ့ရှိမှုအသစ်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကအကြံပေးတဲ့ rebooting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဆံပင်နဲ့အတူသဘောတူထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ် ဦး သဘောတူအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူနှစ် ဦး လုံးကဆံပင်မပြည့်တဲ့အိပ်ခန်းတွေပြင်ပမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါအရာ, အစွဲဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏စိတ်နှလုံးမှာတည်ရှိသည်သမျှ veracity, ကယ့်ကိုငါ့အသက်ကိုကိုပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအသစ်ကဝါသနာ, ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လာပြီသို့ညွှန်ကြားထားရာ (ပကတိ, တက်လာမဟုတ်ကြည်လင်-ကိုးကွယ်ခြင်း, အသိမှာ) ငါ၌တစ်အများကြီးနက်ရှိုင်းကောင်းစွာစွမ်းအင်, အာရုံစူးစိုက်ဖို့ပိုနိုင်ပါကပိုမောင်းနှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားခဲ့ရနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ whinging မပါဘဲနံနက်ယံ၌ထ။
သို့သော်ထိုစာရင်းကသင့်အားခဏတာမျှပင်လိင်ကိစ္စမှထွက်ရန်မကြိုးစားပါကအကောင်းဆုံးသောအရာမှာကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်နေပြီးရှင်းလင်းသောခြေကျင်းတစ်ချောင်း၏မြင်ကွင်းကကျွန်ုပ်ကိုစိုက်ထူရန်လုံလောက်သည်။ လူတိုင်းပျော်ရွှင်ပါစေ။ သင့်ရဲ့ pancakes ကိုခံစားပါ။
ORIGINAL ဆောင်းပါး LINK